Super Seven Stars Co.,Ltd မှ HR Director | MyJobs
လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအားလုံးကုန်ပစ္စည်း နှင့် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များကုန်သွယ်ရေး နှင့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေး အလုပ်အကိုင်များစာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များစိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူ‌ရေးအလုပ်အကိုင်များစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များဆော့ဗ်ဝဲ နှင့် အချက်အလက် ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များဆေးဝါး နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များဖန်တီးမှုပိုင်းနှင့် ဒီဇိုင်းပိုင်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များဖောက်သည် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များယာဉ်မောင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀န််််ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များရောင်း၀ယ်ဖောက်ကားခြင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အလုပ်အကိုင်များလူမှုရေးနှင့် လုပ်အားပေး အလုပ်အကိုင်များလူ့အင်အားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များသုတေသန၊ သင်ကြားရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး အလုပ်အကိုင်များဟိုတယ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု အလုပ်အကိုင်များအကြံပေး နှင့် နည်းဗျုဟာပေး အလုပ်အကိုင်များအင်ဂျင်နီယာ နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များအစားသောက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များအဆောက်အဦးပိုင်း နှင့် ဗိသုကာ အလုပ်အကိုင်များအရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များအုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များဥပဒေဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များ
လုပ်ငန်းကဏ္ဍအားလုံးကြော်ငြာ ၊ မီဒီယာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်းမော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်းဘဏ် ၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း နှင့် အာမခံလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပညာရေးလုပ်ငန်းစွမ်းအင်လုပ်ငန်းဖျော်ဖြေရေး၊ ပွဲအခမ်းအနားများနှင့် အားကစား လုပ်ငန်းအစိုးရကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းဟိုတယ်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်းဥပဒေဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်းသတ္တုတူးဖော်ရေး ၊စွမ်းအင် နှင့် သတ္တု ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားရေး လုပ်ငန်းလက်လီးအရောင်း /အ၀ယ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်ရှင် နှင့် လူသုံးကုန် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းသင်္ဘောလိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
တည်နေရာအားလုံးMandalayOutside MyanmarRest of MyanmarYangon
MyJobs မှာ အခမဲ့ စီဗီ ရယူလိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ အလုပ်အကိုင် ရာဇဝင်ကို ၈၀% ပြည့်အောင် ဖြည့်စွက်ပြီး အဆင်သင့် စီဗီ ကို အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါပြီ။ ဤနေရာတွင် ဖြည့်လိုက်ပါ။
/ HR Director
Super Seven Stars Co.,Ltd
MMK 4,000,000 - 5,000,000
Set up the HR infrastructure Develops Organization Strategies Guides management and support to IPO process
ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Masters
အတွေ့အကြုံအဆင့်: Executive level
အတွေ့အကြုံကြာချိန်:6years
Set up the organization and Develops organization strategies
Implements HRIS System
Implements human resources strategies by establishing department accountabilities, including talent acquisition, staffing, employment processing, compensation, health and welfare benefits, training and development, records management, safety and health, succession planning, employee relations and retention, compliance, and labor relations.
Develops human resources operations financial strategies by estimating, forecasting, and anticipating requirements, trends, and variances; aligning monetary resources; developing action plans; measuring and analyzing results; initiating corrective actions; minimizing the impact of variances.
Supports management by providing human resources advice, counsel, and decisions; analyzing information and applications.
Guides management and employee actions by researching, developing, writing, and updating policies, procedures, methods, and guidelines; communicating and enforcing organization values.
Updates job knowledge by participating in conferences and educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organizations.
Builds, directs, manages and ensures implementation and effectiveness of the SSS company all department’s Performance Management and Improvement System.
အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
Senior Recruitment & Selection Assistant Male/Female(1) Post
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: လူ့အင်အားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ
HR Manager (Recruitment)
Otsuka Pharmaceutical (Pocari Sweat)
MMK 800,000 - 1,000,000
HR and Admin
FP Myanmar Co.,Ltd
Payroll Specialist (Urgent)
City Properties Co.,Ltd
MMK 400,000 - 600,000
#MyJobs100 ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း ၀ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ လုံခြုံရေးမူ၀ါဒ အလုပ်ခေါ်ယူသည့်ကုမ္ပဏီများ ၀ီဂစ်
MyJobs 2020. မှမူပိုင်ခွင့်အားလုံးပိုင်ဆိုင်သည်။
ဤဝက်ဆိုက် သည် ကွက်ကီးများကိုအသုံးပြုနေပါသည်။ သင့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်ရန်အတွက် ဤဝက်ဆိုက်သည် ကွက်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဝက်ဆိုက်ကို အသုံးပြုချင်းဖြင့် အညွှန်းပြခြင်းကို တိုးမြှင့်ရန်၊ ဆိုက်အသုံးပြုမှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့် ကျွန်တော်တို့၏ မားကက်တင်း ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို အ‌ထောက်အကူပြုရန် တို့အတွက် သင့်ရဲ့ စက်ကိရိယာထဲတွင် ကွက်ကီးများကို ထားရှိထားရန် သဘောတူပါသည်။ ပိုမို သိရှိရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွက်ကီး မူဝါဒကို ကြည့်ပါ။